Dowladda Kenya oo u diyaar garoobeyso fatahaada El Nino ee la filayo in ay dalka ku dhufato | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Dowladda Kenya oo u diyaar garoobeyso...
Dowladda Kenya oo u diyaar garoobeyso fatahaada El Nino ee la filayo in ay dalka ku dhufato
Dowladda ayaa shaaca ka qaaday in ay si weyn ugu diyaar garowday saameynta ka dhalan karta fatahaadaha El Nino ee lagu wado in ay dhawaan dalka ku dhuftaan.
Saadaal la sameeyay ayaa muujineysa in roobab ma hiigaan ah oo dalka la filayo iney ka da’aan bisha Octiber ay sababi karaan fatahaadahaasi.
Tallaabooyinka loogu diyaar garoobay xaaladaas oo ay dowladda qaaday ayaa waxaa ka mid ah in wasaaradaha ay quseyso lagu war galiyay in ay la tacaalaan mushkiladaasi soo fool leh.
Masuuliyiinta wasaaradahaasi ayaa laga dalbaday in ay u babac dhigaan xal u helida saameynta fatahaada isla markaana ay dowladda ka dalbadaan ka qeyb qaadashada dhankeeda.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Mr William Ruto oo arrintaan ka hadlay ayaa sheegay in ay heystaan waqti fiican digniintana ay si buuxda uga jawaabeyso dowladda.
Dhawaan ayey ahayd markii ay dowladda Countiga Nairobi sheegtay in ay u diyaar garowday roobabka xoogan ee la saadaaliyay bisha October.
Dhamaan wadooyinka ayaa loo dayac tiray meelaha ay biyaha ku qulqulaan iyo godadka loogu tala galay in ay ku gudbiyaan.